သုခုမနန်းတော်: ဘုရားပေးတဲ့ဆေး (၂)
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 06 September 2009 အမျိုးအစား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
လေ့လာမှုတွေကနေတွေ့ရှိရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကများပြားလှပါတယ်၊ အဲဒါတွေကတော့ .....
၁. စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှု၊ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှု၊ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်မှုတို့ကိုလျော့ပါးစေတယ်
၂. မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်စေတယ်
၃. ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ရသနဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခံစားမှုကိုရစေတယ်၊ ရောင့်ရဲမှုကိုဖြစ်စေ တယ်
၅. Autonomous nervous system လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အသက်ရှုမှု၊ သွေးလည် ပတ်မှု၊ အစာခြေမှု စတဲ့လုပ်ဆောင်မှုစနစ်တွေကို ကောင်းမွန်စေတယ်
၆. နှလုံးခုန်နှုန်းကို လျော့ကျစေတယ်
ရ. အသက်ရှုနှုန်းကို လည်းလျော့ကျစေတယ်
၈.အသက်ရှုခြင်းရဲ့ထိရောက်မှုကို တိုးစေတယ် (အသက်ရှုဝတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်ပိုရတယ်)
၁၀. နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကောင်းမွန်စေတယ်
၁၁. အရေးပြားဟာ သွေးကိုပိုမိုရရှိတဲကအတွက် သွေးရောင်လွှမ်းပြီးအသားအရေကိုပိုမို ကြည်လင်စေတယ်
၁၂. အစာအိမ်နဲ့အူရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေတယ်
၁၃. Endocrine function လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူလိုအပ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကိုပို့လွှတ်ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်ကိုတိုးမြှင့်စေတယ်
၁၅. အောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုကို ပိုမိုလာစေတယ်
၁၇. မျက်လုံးကကြည်ပြီး၊ လက်ကလုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ဆောင်မှု hand eye co-ordination တွေကို ကောင်းမွန်စေတယ် ၊ (ဥပမာ လက်ရေး၊ ရေးတယ်ဆိုရင် မျက်လုံးကကြည့်ပြီး လက်ကိုဘယ်လိုရေးရမယ် ဆိုတာညွှန်ကြားတာမျိုးပါ၊ မျက်လုံးကကြည့်ပြီး ခိုင်းတာကို သေချာသိချင်ရင် မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးရေးကြည့်ပါ၊ လက်ရေးကညီညာပြီး စာလုံးပီပြင်နေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး)
၁၈. တုန့်ပြန်မှုတွေကို လျင်မြန်လာစေတယ်
၁၉. ကိုယ်နေဟန်ထား ( body posture ) ကိုအချိုးကျစေတယ်
၂၀. ခွန်အား( strength ) ကို တိုးစေတယ်
၂၁. သက်လုံကို တိုးစေတယ်
၂၂. ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းစေတယ်
၂၃. စွမ်းအင် ( energy ) ကို တိုးစေတယ်
၂၄. ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေစေတယ်
၂၅. ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ပျော်စေပြီး ၊ အိပ်ရေးဝဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အိပ်ချိန်ကို လျော့စေတယ်
၂၆. နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေတယ်
၂၇. တည်ငြိမ်မှု stability ကို ရရှိစေတယ်
၂၈. အမြင်အာရုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်
၂၉. ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုပြီး အနားရစေတယ်
၃၀. ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် နဲ့ သင်ယူမှု စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေတယ်
၃၂. ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဆေးဝါး စတဲ့စွဲစေတတ်တဲ့ အရာတွေကိုဖြတ်ဖို့ စွန့်လွှတ်ဖို့ လွယ်ကူစေတယ်
၃၃. အကြားအာရုံကို ကောင်းစေတယ်
၃၄. အသက်အရွယ်အိုမင်းမှု ကို နှေးစေတယ်
၃၅. စိတ်ကို နုပျိုစေတယ်
တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ ဆက်စပ်မှု အပိုင်းကို ဆက်လက်တင်ပြချင်ပါတယ် ၊ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရဲ့အကြောင်းရင်း တော်တော်များများကိုလည်း ပိုပြီး နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိ ပါတယ်။ ကျွန်တောာ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ မိခင်ဝမ်းထဲမှာကတည်းက စတင်ပြီးတော့ အသက် ၂၀ အထိ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်၊ အသက်၂၀ကျော်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မဖွံ့ဖြိုးတော့သလောက်နီးပါးဖြစ် သွားပါတော့တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ ပညာရှင်များက IQ peak ကို အသက် ၂၀ လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ကြပါတယ်၊ ဒါကတရားအားထုတ်ခြင်း နဲ့ ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ မလေ့လာ ခင်အထိ လက်ခံထားတဲ့အချက်ပါ၊ လေ့လာမိတဲ့အခါ မှာတော့ တရားအားထုတ်ခြင်းဟာ neuron နျူရွန် လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကိုပွားများလာစေတဲ့အပြင်၊ ဦးနှောက်ဆဲလ် တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုပြီးချိ်တ်ဆက်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်၊ ကာလရှည် ကြာ တရားအားထုတ်သူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရဲ့ဦးနှောက်ကို တိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ကြီးထွား နေတာကိုတွေ့ ရှိရပါတယ်။
ပြီးတော့သာမန်လူအများစုမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ဘယ်ခြမ်းနဲ့ညာခြမ်းဟာ နှစ်ဖက်လုံးအလုပ်လုပ် လေ့မရှိပဲ၊ သန်ရာသန်ရာတစ်ဖက်ကသာအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ အခြားတစ်ဖက်ရဲ့ လုပ် ဆောင်မှုတွေဟာ မှေးမှိန်နေ လေ့ရှိပါတယ်၊ ပါရမီရှင်ဖန်တီးရှင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို လေ့လာတဲ့အခါ နှစ်ဖက်လုံးအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တရားအားထုတ်သူ တွေရဲ့ ဦးနှောက်ကတော့နှစ်ဖက်လုံး အလုပ်လုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်မှာလှိုင်းတွေရှိပါတယ်၊ ကြိမ်နှုန်း အနည်း အများကိုလိုက်ပြီး ဒီလိုခွဲထားပါသေးတယ် ။
၁. Beta ( 13 -25 cycle per second )
၂. Alpha ( 8 -12 cycle per second )
၃. Theta (4- 8 cycle per second )
၄. Delta ( 0.5 to4cycle per second )
အဲဒီလှိုင်းတွေထဲကနေ ဒုတိယနဲ့ တတိယ လှိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Alpha နဲ့ Theta လှိုင်းတွေ ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ အဲဒီလှိုင်းနှစ်မျိုးကို တရားအားထုတ်နေစဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ၊ တကယ်လို့ ( ၆ ) လ ကျော် တရားအားထုတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရပြီးသွားပြီဆိုရင် သာမန်အချိန်များမှာလည်း alpha လှိုင်း တွေကို ထုတ်လွှတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ အဲဒီလှိုင်းနှစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကိုသိရအောင် သူတို့ အကြောင်းကို အောက်မှာဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလှိုင်းပုံစံကတော့ စာတစ်အုပ်ကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်နေတဲ့အခါ ၊ ဖျော်ဖြေရေး အစီစဉ်တစ်ခု ခုကိုကြည့်ရှုအနားယူနေတဲ့အခါ၊ တရားအားထုတ်ခြင်းစတင်ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာတွေ့ရ တတ်ပါတယ် ၊ စိတ်ဟာအပန်းပြေပြီး အနားရနေတဲ့အခြေအနေပါ။ တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ဖန်တီးဖို့နဲ့ အချက်အလက်တွေကိုသင်ယူမှတ်သားဖို့ အကောင်းဆုံးအခြေအနေပါ၊ ဦးနှောက် ရဲ့ ညာခြမ်းကနေ အဓိကလုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ အယ်လ်ဖာဦးနှောက်လှိုင်း ပိုမိုရှိတဲ့သူများဟာ စိတ်တင်းကြပ်မှု၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုတွေလျော့နည်းစေပါတယ်၊ ရလဒ်အဖြစ် ကိုယ်ခံအား စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ဟာလဲ ဒီဦးနှောက်လှိုင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပါ၊ ဖန်တီးမှုကောင်းတဲ့သူများဟာ ဖန်တီးမှုတွေကိုစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာ၊ စွမ်းရည်ကောင်းသူအများစု ဟာ နက်နက်ရှိင်းရှိုင်းတွေးတောစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ၊ အားကစားသမားများဟာ သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါများမှာ ဒီ alpha ဦးနှောက်လှိုင်းတွေဟာ ရုတ်တရက် များပြာစွာထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိတယ် ( big alpha brain wave bursts ) လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကပြောပါတယ် ။ ဒီလှိုင်းတွေဟာ သက်တောင့် သက်သာရှိမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု နဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လို့လာပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်ဒီလှိုင်းဟာ လူတိုင်းအတွက် အလွန်ကို ကောင်းတယ် လို့ပြောရမှာပါ။
Theta (4to8 cycles per second)
ဒီလှိုင်းပုံစံဟာ စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အခါ၊ ခဏတစ်ဖြုတ်အိပ်တဲ့အခါ၊ အိပ်ချင်လို့ငိုက်နေတဲ့ အခါများမှာတွေ့ရတတ်သလို စူးစူးစိုက်စိုက်တရားထိုင်နေတဲ့အခါ ( deep meditation ) များမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့ဆံပင်ရှည်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြီးသင်နေတဲ့အခါ မျိုးမှာ၊ ရေပန်းအောက်မှာသီချင်းဆိုရင်း ရေချိုးနေတဲ့အခါ၊ ရေစိမ်ကန်ထဲမှာစိမ်ပြီး ရေချိုးနေ တဲ့အခါ စတဲ့ အေးအေးလူလူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်နေရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ လည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ ဒီလှိုင်းတွေကဈန်ဝင်စားမှု (inspiration)၊ စေ့ဆော်မှု (motivation) တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်၊ ဒီလှိုင်းတွေက တခါတရံမှာ ကြာမြင့်စွာကတည်းက မေ့နေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်အမှတ်ရလာစေပါတယ် ( long forgotten memory come to the surface ) ၊ ဒီလှိုင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးစေတယ်၊ အတွေးအခေါ်တွေကို မြင့်မားစေတယ်၊ အကြောင်းအရာသစ်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်စေတယ်၊ သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးစေတယ်၊ မှတ်ဥာဏ်ကို ကောင်းစေ တယ်၊ အတွေ့အကြုံများကိုစုစည်းပေးပါတယ်၊ အချို့သောသူများဟာ ဒီလှိုင်းတွေ ထုတ်လွှတ် နေတဲ့အချိန်မှာ ပေါ့ပါးပြီးလွင့်မျောနေတဲ့ ခံစားမှုတွေကိုရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်၊ တရား အားထုတ်လို့သမာဓိရလာတဲ့အခါ ပေါ့ပါးနေတဲ့ခံစားမှုကို ရရှိတတ်တယ်လို့ကြားခဲ့ဖူး ပါတယ် အဲဒါဟာ ဒီလှိုင်းတွေထွက်လာလို့ပဲလို့ထင်မိပါတယ်၊ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ တွေးဆချက် ပါ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း စူးစူးစိုက်စိုက်တရားထိုင်နေတဲ့အခါ တွေ့ရတယ် လို့ဆိုထား တာကိုး၊ အသက်၂ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်ထိ ကလေးငယ်အများစုမှာလည်း ဒီစိတ်အခြေအနေမျိုး ဟာ စိုးမိုးလျက်ရှိနေတတ်ပါတယ်၊ သူလည်းဦးနှောက်ရဲ့ ညာခြမ်းက ပိုအလုပ်လုပ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် တရားအားထုတ်နေတဲ့အခါ ၊ လုံးဝအနားယူနေတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ ဦးနှောက် နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ လှိုင်းတွေဟာပေါ်လာပါတယ် ၊ ပြီးတော့ လှိုင်းထိပ်ကို ရောက်ချိန်တွေဟာလဲ တူညီလာကြပါတယ် ၊ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို Synchronization လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Sync လို့လဲ အတိုကောက်ခေါ်ပါတယ် ၊ ဦးနှောက်ရဲ့ လှိုင်းတွေဟာ ဟာမိုနီ ဖြစ်ပြီး စည်းချက်ညီလာတဲ့ သဘောပါ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ အဲဒီလိုစည်းချက်ညီမှုကြောင့် ကြီးကျယ်တဲ့ စိတ်ရဲ့ စွမ်းအင် တွေကိုရရှိစေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။ အလွန်များပြားတဲ့ မှတ်သားမှု တွေကို လျှင်မြန်စွာ မှတ်သားနိုင်ခြင်း ၊ ဖန်တီးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ ဦးနှောက်ထိန်းချုပ်မှု ကောင်းခြင်း စတာတွေ ကိုရရှိစေပါတယ် ။
တရားအားထုတ်သူများဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်တင်းကြပ် မှု၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှု ၊ ဒေါသ ၊ ၀မ်းနည်းမှု ၊ ကြောက်ရွံ့မှု တွေနည်းပါးပြီး သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေပေါများခြင်းအပြင် လူအများနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေရရှိပါ တယ်၊ မိမိရဲ့ဘ၀ကိုရောင့်ရဲပြီး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေလည်းရရှိကြပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့လှိုင်းတွေဟာ စည်းချက်ညီလှုပ်ရှားလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဓါတုပစ္စည်းတွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။
• GABA ( gamma amino bytyric acid ) လို့ခေါ်တဲ့ neurotransmitters ကို တိုးစေပါ တယ် ၊ အဲဒါလျော့နေရင် အရက်၊ မူးယစ်ဆေး၊ လောင်းကစား၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ကဖင်း နဲ့အခြားစွဲစေတတ်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို လွယ်လင့်တကူနဲ့ စွဲကပ်စေပါတယ် ၊ ဖြတ်ဖို့လည်း ခက်ပါတယ်၊ တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေကတော့ GABA တိုးလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြတ်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်
• DHEA ( Dehydroepiandrosterone ) ဟော်မုန်းကိုတိုးစေတဲ့အတွက် ကိုယ်ခံအားစံနစ်ကို အားကောင်းစေပါတယ် ၊ မှတ်ဥာဏ်ကိုကောင်းစေပါတယ် ၊ နည်းခဲ့ရင် နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချို ၊ ကင်ဆာ စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊
• Melatonin ဟော်မုန်းကို တိုးစေပါတယ် ၊ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ကို အိပ်ရေးဝစေပြီး လန်းဆန်းစေပါတယ်၊ • Serotonin ဟော်မုန်းကို တိုးစေပါတယ် ၊ လျော့နည်းနေရင် စိတ်ကျရောဂါ ၊ အ၀လွန်ရောဂါ အိပ်ပျက်ရောဂါ ၊ ခေါင်းကိုက်ရောဂါတွေကို ရစေနိုင်ပါတယ်။
• Endorphins လို့ခေါ်တဲ့ neurotransmitters တွေကိုတိုးစေပါတယ် ၊ သူက အကိုက်အခဲ တွေကို ပြေပျောက်စေပါတယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုရသ ( sense of happiness ) ကိုဖြစ်စေပါတယ်၊ သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျစေပါတယ် ၊ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။
• HGH ( human growth hormone ) ကို တိုးစေပါတယ်၊ တစ်သျှူးတွေ၊ အသားတွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ အရိုးတွေ မှန်သမျှကို တည်ဆောက်ပေးနေတဲ့အရာပါ ၊ အဆီကိုတော့လျော့ စေပြီး၊နှလုံးကိုလည်းအားကောင်းစေပါတယ်။
• pH ကိုတိုးစေပါတယ် ၊ ဆီးချိုနဲ့ကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များဟာ pH နိမ့်နေတယ် လို့ဆိုပါတယ်၊ တရားထိုင်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့ pH ကို မြင့်လာစေပြီး ရောဂါကို သက်သာစေ ပါတယ်။
• Cortisol ကို ကျဆင်းစေပါတယ် ၊ Cortisol ဟာ စိတ်ကျရောဂါရဲ့လက်သည်တရားခံပါ ၊ Cortisol ရှိနေရင် ကိုလက်စထရော ( cholesterol ) ကို တိုးစေပြီး၊ နှလုံးရောဂါ နဲ့ လေဖြတ် ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကိုလည်း သေဆုံးစေပါတယ် ၊ တရားအားထုတ် တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီရောဂါမျိုးတွေနဲ့ ဝေးစေပါတယ်။
ကဲ….ဒီလောက်များလှတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဘယ်ဆေးကမှမပေးနိုင်ပေမယ့်၊ တရားအား ထုတ်ခြင်းကပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ခြင်းဟာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာ ချမ်းသာ ရေးမျှသာမက၊ သံသရာကလွတ်မြောက်ရေးအထိပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေး ၊ ဘုရားပေး တဲ့ ဆေးလို့ပဲဆိုလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ဦးလေးကြီး (or) kwno
ဘုရားပေးတဲ့ဆေးက လောကမှာ အကောင်းဆုံးပါ..
ဘုရားပေးတဲ့ဆေး လာသောက်တယ် ။
ပြီးတော့ ခုခေတ်ကြီးမှာ ဆေးတုတွေလည်း ပေါပါဘိနဲ့ ။
တချက်ခုတ် အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ် အောင် ဒီဆေးလေးဘဲ မှီဝဲပါတော့မယ်။။
(စကားမစပ်.. ဒီဦးလေးကြီးက ဘယ်သူ့ ဦးလေးကြီးလဲ ၊ နောက်တခါလာရင် မိတ်ဆက်ပေးအုံးလေ...း) )
လက်နာပျောက်တဲ့ဆေးလဲ သူ့ ဆီပဲတောင်းလိုက်လေ..
ဘုရားပေးတဲ့ ဆုပါပဲ အဲလေ ယောင်လို့ သီချင်းနဲ့ မှားသွားတယ် ဘွာ ဘွာ တတ်သလောက် ဖတ်သွားတယ် သိရား ခိခိ ဘုရားပေးတဲ့ ဆေးက အကောင်းဆုံးပဲ ညီမလဲ အားရင် တရား ထိုင်တယ် ဟိဟိ နာရီဝက်တည်းပါ သိပ်မများပါဘူး နော် ဟဲဟဲ
လည်လည် လာ ကျေးဇူးးအထူးတင် ရှိ ဘိုင်တာ့တာ
ဘုရားပေးတဲ့ ဆေးက ဘာဆေးနဲ့မှမတူ တစ်မူထူးခြားပြီး အရမ်းအစွမ်းထက်တာဘဲ။ လူသားတိုင်း သောက်သုံးသင့်တယ်။